शब्दकोश: साथीहरूको माझमा
- 'किन होउ सर पर-पर तपाईँ, अलि हामीसँगै यता आउनू न !'
मे ४ आइतबारका दिन मार्टिन चौतारीको गेट छिचोलेर माइतीघर चोकको लागि सेन्ट जेभियर्स कलेजतिर मोडिन लाग्दा साथी अभिनय थापा बोल्यो । बोली सामान्य र स्वाभाविक भन्न सकिन्थ्यो । तर, बोलीसँगै बीच-बीचमा मिसिएको उसको हाँसोले कता-कता मलाई व्यङ्ग्य गरिरहेको थियो । र यो एकपटकको कुरा होइन । रत्नराज्य क्याम्पसमा स्नातक पढ्दादेखिको साथी अभिनयको हाँसोमा केही समययता मप्रति रहस्यात्मक हाँसो फुस्किएको पाउनु भेटैपिच्छेको मेरो रुटिन भइरहेको छ । यो हाँसो किन र केका लागि, म बुझ्छु । जुन कुरालाई यहाँ सविस्तार खुलाउनु आवश्यक देख्दिनँ । कुनै-कुनै कुरा बुझेर पनि त्यसलाई नदेखाउनुपर्ने समय/अवस्थाको नियम हुन्छ । बनेको एउटा नयाँ सम्बन्धले मेरा केही साथीलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा बिझाउनु स्वाभाविकै थियो । यसको लागि म गर्न नै के पो सक्थेँ ?
कुनै पनि कुरा वा घटनाको प्रतिक्रियामा कोही साथी बोलेरै अथवा सङ्केतबाट व्यङ्ग्य र्छछन् कोही साथ दिन्छन् । अनि कोही मौन रहेरै 'साथी' को अहम् दायित्व पूरा गरिरहन्छन् । उनीहरूको यो मौनता आफ्नो लागि स्वीकृति हो कि कटु खिसीटिउरीको गुपचुप सिलसिला, बुझिनसक्नु हुन्छ । यस्तो कुरा बुझ्नलाई कसैले साथीहरूको माझमा समय नष्ट गर्ने मूर्खता पनि गर्न हुन्न सायद । जे छ, छँदै छ । नभएको टेढेमेढे कुरालाई भएको पार्न कम्तीमा मैले त्यस्तो खेल जानेको छुइनँ ।
अन्तर्मुखी यात्रा र म
मेरो अन्तर्मुखीपनले कहिलेकाहीँ मलाई जोरजुलुमसाथ अत्याएर रुवाउँछ । कलेजमा मिडिया विषय लिएर पढ्न थालेदेखि विषयको विशेषतागत प्रवृत्तिले केही बहिर्मुखी हुँदै आएँ । अन्तर्मुखी हुनाले आफ्नो मनको कुरा हत्तपत्त कतै निकासमा जान मान्दैन र कुनै न कुनै तरिका अपनाएर जनाउ गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छुटिरहेको हुन्छ । यस बीचमा राजधानीको भीडमा गनिन आएका अनेक अनुहारमध्येका केही विशेष आकृति आफ्नो सम्पर्कमा बुनिन आए । र, यो सहरी परिवेशका साथीहरूसँग जति नै घनिष्ट भएँ भने पनि अन्तरङ्ग हुन नसक्नु मेरो दशा भइरहृयो । थाहा छ, यो मेरै अघुलमिलपनको नतिजा हो । फेरि, म जस्तो छु त्यस्तो नहुन पनि कसरी पो सक्छु र ? यस्तो कठोरता पनि मैले अनेक सम्बन्धबाटै सिक्दै आएँ । के पनि सत्य हो भने, मिल्ने साथी बन्छु भनेर बिजनेसको हिसाबकिताब मिलाएजस्तै तयार गरेर, योजना बनाएर हुने पनि होइन ।
सम्बन्ध यत्तिकै १० मिनेट मात्रको यात्रामा साथै हिँड्दाहिँड्दै पनि अटूट भइदिन्छ । अनि वर्षौँको निकट सहयात्रा पनि एकाएक बलेँसीमा बज्रिएको माटोको गाग्री बनिदिन सक्छ । यस्तो थाहा पाएर पनि सम्बन्धको मामिलामा सतर्क हुन सकिने कुरा होइन, पछिको कुरा कसरी थाहा पाउनु । तर पनि, सम्बन्धको सूचारुमा आफ्नो समान भूमिका हुने निश्चित भए पनि हरेक सम्बन्धको सुरुवातमा म नमीठो गरी काँप्ने गर्छु कारण, आफ्नो भूमिका इमानको भए पनि अरुबाट धोका पाउने कुरालाई त कसरी पो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र ? न आउने बाढीलाई रोक्नु न जाने बतासलाई छेक्नु । निश्चितता यहाँ हुन्छ के नै कुराको ? दूधे बालकलाई मन्दिरछेउ निर्जीव मूर्तिको रेखदेखमा छाडेर अर्को कुमारी रात खोज्दै हिँड्ने एक्कादुई आमा हाम्रै समाजमा हुन्छन् । आमा र सन्तानको यस्तो अजम्मरी साइनो !
साथीहरूको सङ्गतिमा म धेरै रहेँ । कोही सञ्चार संस्थामा काम गर्दाका साथीहरू । कोही साहित्यकर्मका सिलसिलामा बनेका साथीहरू । कोही कलेज पढ्दाका साथीहरू । कोही सडकमा जम्काभेटमा आएका साथीहरू । साथी नै साथीको यो महासागरमा तुलनात्मक रुपमा स्कुले साथीजस्तो स्वतःस्फूर्त र सम्पूर्ण भावनात्मक दुरासयमुक्त साथी कतै दोहोरिएर आएनन् । स्कुलमा १० वर्षको लामो कालखन्डको सामीप्यता मिल्ने भएर पो हो कि ? तर होइन, सम्बन्धमा समयसीमाको कुनै हिसाब हुन्न । यो मेरो भोगाइको कुरा । खासमा अधिकांश मित्रताको पहिरन व्यापारिक हतारोमा बुनिन्छन् र त्यसलाई पहिरिएर न्यानो-शीतल के-के पाउनुपर्ने हो व्यापारिक हतारोमै खोजिन्छन् । अर्थात् 'मैले मात्र फोन गर्नुपर्छ भन्ने के छ, उसले गरोस् तब मात्र फेरि म गर्छु ।'
मन भएर पनि उता फोन गरोस् भन्ने साथीको परिबन्द र विवशता के हुन्छ, यता फोन कुर्ने साथीको अनुमान डेग चल्दैन । खालि फोनमै मित्रताको जोखाना हेरिन्छ । नाथे फोनमा झुन्डिएको मित्रताको आन्द्राभुँडी केलाउनुपर्ने त्यो मित्रता के मित्रता !? सम्बन्ध त मनदेखि मनसम्मको रसायनमा जोडिने तुइन होइन र ? लोभी मन तर फोन कुरिरहन्छ र कुरा केलाउँछ- 'ऊ कति आत्मीय हो, कति मतलबी र निठुरी हो थाहा पाइयो ?' तर मित्रतामा एउटा मजबुन भने पक्कै हुन्छ- मीठा-मसिनो बोलेपछि प्रतिक्रियामा ताजा उस्तै बोली फर्किनुपर्छ । जाबो ऐना हेर्दा पनि ऐनाले त हामीलाई हाम्रो अनुहार देखाइदिन्छ भने मान्छेले मान्छेको जवाफ नदिनु ?
साथीहरूको माझमा जब लोडसेडिङ हुन थाल्छ, तब कुनामा दबिएको मैनबत्ती जलाउन मन हुन्न र सम्साँझै ढुक्कले सुतिन्छ । यही भवितव्य हो ।
मे ८, २००८ (नक्साल)
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, May 08, 2008